Rafitra fitehirizana sy famerenana mandeha ho azy (AS / RS))
AS / RS dia fampifangaroana ny haitao sy ny fitaovana fitehirizana maoderina. mety hahatratra 40 metatra na mihoatra ny haavony, ampiasaina habaka betsaka, amin'izay hanatsara ny fampiasana ny habaka sy ny fahombiazany mivantana. ny fitahirizana miakatra, mandeha ho azy ary mandeha mora foana.
ampidiro ao: ny rafi-pitobiana, ny stacker (talantalana finday, ny sarety fandefasana onjam-peo, ny AGV na ny RGV sns.) fitaovana mandeha ho azy, rafitra mpampita (manasokajy), ary rafitra fanaraha-maso solosaina sns.
Mandeha ho azy feno: mampiasa milina stacker mandeha ho azy hisolo ny artifisialy hitahiry entana sy fakana entana, haingana sy mahomby. Satria tsy mila miditra amin'ny trano fitehirizan-trano ireo mpiasa, manatsara fatratra ny tontolon'ny asa.
Fahamarinana avo lenta: AS / RS dia mitantana entana ao anatin'ny WMS sy WCS, manatsara ny fahaiza-mitantana ny entana. manatsara ny marina sy azo itokisana, ny fitantanana trano fitehirizana ivelany, ary ny tatitra dia mivadika ho tsotra sy haingana, mihena be ny herin'ny mpiasa.
Mahomby sy milamina: AS / RS dia misy rafitra mpampita (manasokajy), fitehirizana entana haingana sy haingana.
Tsotra sy mety: ny mpiasa miasa sy mikojakoja kely fotsiny no ilain'ny AS / RS, mitsitsy mpiasa sy vola
Talantalana telo-habe, lalantsara stacker, rafitra mpampita pallet miditra sy mivoaka, rafitra famakiana kaodim-bidy haben'ny habe, rafitry ny fifandraisana, rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy, rafitra fanaraha-maso solosaina, rafitra fitantanana solosaina ary hafa toy ny kabinetra fanaparitahana herinaratra tariby sy tariby , lovia, fanitsiana Rafitra mandeha ho azy sarotra misy fitaovana fanampiana toa ny lampihazo sy ny sehatry ny firafitra vy.
Mampiasà ny lozisialy lozisialy mitambatra kilasy voalohany, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso mandroso, bus, fifandraisana ary ny haitao fampahalalana, amin'ny alàlan'ny hetsika voarindra amin'ireo fitaovana etsy ambony hanatanterahana ireo asa fitahirizana entana.
◆ Mandeha ho azy.
◆ Mila rindrambaiko WMS hifehezana ny rafitra.
◆ Mety hampiakatra ny haavon'ny trano fitehirizana izany, hamonjy ny vidin'ny tany sy ny vidin'ny asa.
◆ Afaka manome ny endrika sy ny kajy izahay.
Teo aloha: HEGERLS mpihazakazaka radio